SMIDA vanopinda 2017 South china (Guangzhou) advanced laser uye process application kuratidza - Shenzhen Simida Intelligent Equipment Co., Ltd.
Imba > Nhau > SMIDA nhau
Maodzanyemba china, senzvimbo yekugadzira uye yakanyanyisa simba nzvimbo yeindasitiri munyika, yagara iri tarisiro ye laser uye optoelectronics maindasitiri. The kumaodzanyemba China (Guangzhou) yemhando Laser uye muitiro chikumbiro kuratidza kuri yakanaka kwazvo chikuva kuti Laser chikumbiro musika haufaniri kurasikirwa.
Chiratidziro chakanyatsoratidza iyo yepamusoro laser yekugadzira tekinoroji, kusanganisira laser kucheka, laser yekunamatira, laser kuchera, laser yekumaka, laser yekuveza,, laser etching, laser cladding, laser kuomesa, nezvimwe. uye yepamusoro-kumagumo smart michina, senge maindasitiri marobhoti, otomatiki ekugadzira mitsara, muchina chiratidzo masisitimu.
Munguva imwecheteyo yekuratidzwa, 2017 South China International Photonic Intelligent Kugadzira uye Kushanda Technology Musangano ichaitwa, iyo inosanganisira "South China Laser Processing Application Market Summit", "International Advanced Laser Innovation Technology Forum" uye "South China Inowedzera Kugadzira Tekinoroji. Forum ". Uye "Yenyika Laser Yekuchengetedza Kosi Yekudzidzisa"
Nyika yedu iri panguva yakaoma yekuchinja kubva kune huru nyika yekugadzira kuenda kune rakangwara simba rekugadzira. Iyo yechinyakare michina uye yekugadzira tekinoroji iri mukurumidziro inoda kukwidziridzwa uye nekukurumidza kupinda munguva yekugadzira mwenje Seyamberi yekugadzira tekinoroji, kugadzira laser kwave kushandiswa zvakanyanya muzvikamu zvakakosha zvehupfumi hwenyika senge michina yekugadzira, mota, zvigadzirwa zvemagetsi, microelectronics, simbi nesimbi simbi, muchadenga uye mamwe maindasitiri.
Iyi foramu yakanyatsobatanidzwa neiyo laser yekugadzirisa kunyorera muSouth China musika ,, yakakoka nyanzvi dzema laser kuti dzive nerondedzero yakadzama nezvekugadziriswa kwemalaser mukugadzira mota, michina kugadzira, kugadzira zvigadzirwa nekugadzirisa, uye kuvaka chikuva chekuwedzera kuchinjana pamwe nekubatana,. Nyanzvi dzinoshuma zvakadzama kududzira kuvandudzwa kwe laser-yekucheka-kumucheto tekinoroji uye laser indasitiri maitiro, uye yakaunza nyowani odhiyo-yekuona kunakidzwa kune indasitiri vezera.